Mica ntụ, Mica Flake, Chips agba - Lingshou
A na-enweta flakes Mica site na otu mpempe akwụkwọ silicate mineral, nke a na-akpọ mica, nke gụnyere muscovite, phlogopite, biotite na ndị ọzọ. Site n'usoro sistemụmazụ dị ukwuu, a na - ekewa ihe ndị dị na mica dị ka iberibe mpempe akwụkwọ, kewara n'ime otu agba sitere na eke ma gbaba n'ime nha flakes. Flakes ndị a pụrụ iche na-enye ihe eji achọ mma sitere n'okike nke na-agaghị enwe ike ịnweta ịnweta mineral ndị ọzọ arụziri ọrụ. Ha bụ ezigbo ndị mmekọ na -emepụta ihe eji emepụta akwa na paịlị yana akwa stereo siri ike maka ihe mpụga na nke ime.
Nkọwapụta Mica ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ anyị: ntupu 20, ntupu 40, ntupu 60, ntanetị 80, ntupu 200, 325 mesh, 400 mbu, 500 na ntanetị, 600 mesh, 800 mesh, 1000 mesh, ntupu 1250 na 2500. O nwekwara ike hazie ya. Mica ntụ ntụ bụ ụdị mineral na-abụghị nke mmiri, nke nwere ụdị ihe eji eme ihe na 49% SiO2 na 30% Al2O3. Mica nwere nnukwu ịba ụba na ihe siri ike. Ọ bụ ụdị mgbakwunye adịchaghị maka akụrụngwa nke mkpuchi, okpomọkụ na-eguzogide, acid na alkali resistance, corrosion resistance na adhesion siri ike, wdg A na-etinyere ya n'ime ngwa eletriki, mkpanaka ịgbado ọkụ, roba, plastik, akwụkwọ, plastik, mkpuchi, ite, ceramik, ịchọ mma na ihe ụlọ ọhụụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Site na mmepe nke teknụzụ, a ga-enyocha ngwa ndị ọzọ.
Vermiculite bụ ụdị mineral a na-eji edozi etinyere Mg na degenerates nke abụọ site na silicates hydrated. A na-etolite ya site na ihu igwe ma ọ bụ mgbanwe hydrothermal nke biotite ma ọ bụ phlogopite. Site na nkebi, vermiculite nwere ike ekewa n'ime vermiculite na-anaghị akọwapụta yana gbasaa vermiculite. Ejiri agba site na agba, a ga-ekewa ya na ọla edo na ọla ọcha (ọdụ). Vermiculite nwere njiri mara mma dịka mkpuchi ọkụ, mgbochi oyi, mgbochi nje, mgbochi ọkụ, mmịnye mmiri na nnabata ụda, wdg Mgbe a na-eme ya maka nkeji 0,5 ~ 1.0 n'okpuru 800 ~ 1000 ℃, olu ya nwere ike ịbawanye ngwa ngwa site na 8 ruo 15 ugboro, ruo ugboro iri atọ, na agba gbanwere ka ọ bụrụ ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha, na-emepụta ihe na-acha uhie uhie na-egbu egbu nke na-abụghị mgbochi acid na adịghị mma na arụmọrụ eletrik.
Flakes Agba, nke a na-akpọkarị dị ka speckle, chips, flake or shei etc. .. Ọ bụ ihe ndị sitere na mineral mineral silicate. Site na usoro nrụpụta ọrụ ngwa ngwa, ọ na-etolite ụdị ihe dị iche iche nke hexagonal n'ụdị mpempe akwụkwọ nke a na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa ndị eji achọ mma nke ejiri plastik na ihe roba site na usoro ọgwụgwọ na usoro kemịkal. Flakes ndị a pụrụ iche na-enye ihe dị n'okirikiri ọla na ọmarịcha agba na-egosipụta n'ụzọ zuru oke na-egosi mmetụta nke konkiri eke na marble. Ngwa ihe ndị a na-ele anya na-agaghị enweta ihe ndị ọzọ. Ya mere, flakes na agba na-enyere aka iwelie ogo nke ngwaahịa gị ka ị na-enwekwu asọmpi n'ahịa gị.
A na-akpọkarị flake agba agba dị ka acrylic flake, epoxy flake, vinyl mgbawa, mgbawa agba. Ọ bụ otu ụdị flakesite mejupụtara nke resin acrylic site na teknụzụ pụrụ iche. O nwere arụmọrụ ngwaahịa pụrụ iche, na-egosi nsonaazụ usoro pụrụ iche na ngwa ngwa nke enweghị ike dochie anya site na flakes ndị ọzọ.
Companylọ ọrụ Akụkọ
Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd, guzobere na Eprel, 2002, dị na Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Anyị bụ ọkachamara emeputa nke mica ntụ ntụ dị mma, flakes agba, flakes composite, vermiculite wdg nwere ikike mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị 10,000 tọn. Companylọ ọrụ anyị kpuchiri mpaghara ihe dị ka 30,000㎡, ebe ndị na-ewu ụlọ na-ewe ihe karịrị 10,000㎡ na ụlọ ọfịs 1,200㎡. N'afọ 2003, ụlọ ọrụ anyị ka azara aha ha dị ka “priselọ ọrụ Na-edebe Nkwekọrịta & Nkwa Nkwa” nke belọ Ọrụ Mmebe na Azụmaahịa Hebei.
(1) Mmetụta Na-egbochi N’eme ihe nkiri, flaks flaky ga-etolite nhazi ihe nkenke, si otua na - egbochi nbata nke mmiri na ihe ndị ọzọ na - emebi emebi, ma ọ bụrụ na iji mica ntụ ntụ (dayameta nke ọkpụrụkpụ na-adịkarị opekata mpe 50, preferab ...
(1) Changgbanwe ngwa Njirimara nke plastik Mica chips nwere ike ịtụgharị ma mee ka ụzarị ọkụ dị ka nke ọma na ịmịpụta ma chebe UV, wdg. Ya mere, ọ bụrụ na ịtinye ala mgbochi mmiri mica dị elu na fim ndị ọrụ ugbo, ọ ga-esiri ike maka ìhè ịpụ. mgbe ọ banyechara na…
Ngwaọrụ: Ngwaọrụ ndị a kwesịrị ịdị tupu ịmalite ọrụ ahụ. Ha bụ ndị a na-ahụkarị ma ị nwere ike ịchọta ha na ụlọ nchekwa ihe ma ọ bụ ụlọ nchekwa ngwaike. Roller Brush Spray Gun…
Ihe egosiputara Ngwaahịa